Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 2 . . .
You are at:Home»Blogs»Tishamwaridzane»Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 2 . . .
By Munyori weKwayedza on	 March 18, 2016 · Tishamwaridzane
MAKADII zvenyu? Ndiri mudzimai ane makore 42 nevana vatatu ndinotsvagawo murume ari pachokwadi nemba ane makore 45 zvichikwira. Ndinobatika pa0712 509 792.
Ndiri mukomana ane makore 30 ndinotsvakawo musikana anoda zvekuroorwa asina utachiona hweHIV ane makore 18-27. Anoda ndibate pa0734 693 893.
Ndiri murume ane makore 33 nevana 2, ndodawo mukadzi ane makore 35 zvichidzika anoda kuroorwa asi anoshanda. Ndiri muHarare, nhare yangu 0718 561 437.
Ndiri murume ane makore 32 nevana 2. Ndotsvakawo musikana kana mukadzi anoda kuroorwa. Zera harina basa asi ngaave anoshanda. Anoda ngaandibate pa0776 123 588.
Ndiri murume ane makore 33 ndinotsvakawo mukadzi ane makore 30 – 37 wekushamwaridzana naye. Ndinobatika pa0774 499 215.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 41 nevana 2, ndinodawo murume ari HIV positive. Andifarirawo ngaandibate pa0734 419 132.
Makadii veKwayedza. Ndiri mukadzi ane makore 20 zvarakamwe uye ndinodawo murume ane mazirudo. Nhare yangu 0737 566 253.
Ndiri mukadzi ane makore 49, HIV+ uye ndinodawo murume ane makore 49 -58 ari HIV positive seni. Nhare yangu 0773 289 915.
rMakadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 47 ndinotsvagawo mukadzi ane makore 30 kusvika 50 ari HIV positive anoda zvekurorwa. Anotya Mwari ngaandibate pa0777 693 400.
Ndiri murume ane makore 49 ndinodawo mukadzi ane makore 39 zvichidzika anotya Mwari. Zvimwe tozotaura, anoda ndibate pa0737 031 085.
Ndiri mukadzi ane makore 28 nevana 2 ndotsvagawo murume anoda kuroora ari pachokwadi ane vana vakewo. Andifarira anondibata pa0717 591 961 tobatana nesms.
Ndiri murume ane makore 33 ndinoda mukadzi ane mwana mumwe chete ane makore 20 kusvika 28. Masms ndinopindura, andifarira andibate pa0774 555 416.
Ndiri mudzimai ane rudo ane makore 49, HIV positive uye ndiri kutsvakawo murume wekushamwaridzana naye asina mukadzi. Ngaave ane makore 50 – 55. Nhare yangu 0718 270 579.
Ndiri murume ane makore 35 ndoda mukadzi ane makore 24 kusvika 34 kana ane mwana. Ndiri kuBeitbridge, ndoshanda muHurumende uye ndobatika pa0718 592 830.
Makadini veKwayedza? Makaita basa ndava naye wangu saka vaifona pa0777 657 253 ngavachirega havo.
Ndiri murume ane makore 30, ndiri muHarare uye ndoda mukadzi ane makore 34 zvichidzika. Zvizhinji tozotaura. Ndibatei pa0716 040 553.
VeKwayedza makadini? Ini ndiri mukomana ane makore 20 ndiri mupfupi uye ndotsvagawo mudzimai asina murume anoda kugara neni ane rudo asi kwete anonditambudza. Ndiri nherera, anoda anondiwana panhamba dzinoti 0777 343 256.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 33 nemwana 1. Ndinotsvagawo mudzimai ane makore 25-30 ane mwana kana asina uye anoziva Mwari. Handina chirwere, anoda ngaandibate pa0777 073 164.
Makadii? Ini ndiri mukomana ane makore 26 ndotsvaga musikana wekuroora ari pachokwadi. Anoda nhare yangu 0774 223 229 asi kwete vakadzi vevanhu.
Ndiri mukadzi ane makore 39 ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane makore 40 kusvika 50. Nhare yangu 0776 019 717.
Makasimba here? Ndotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20. Ini ndine 20, ndinonzi Takudzwa. Nhare yangu 0777 161 033.
Makadii veKwayedza? Ndiri kutumira shambadzo dzangu asi hadzisi kuburitswa. Ndiri mudzimai ane makore 28 nevana vatatu ndoda murume ane makore 33 kusvika 47. Ngaave ane vana vake anoda kuongororwa ropa. Andifarira nhare yangu 0771 077 615.
happy wheels /> ******
Ndiri mukomana ane makore 22 ndinotsvagawo musikana ane makore ari pasi pe20. Ngaafone pa0779 235 306.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukadzi ane makore 43 handina mwana uye ndotsvagavo murume ari pachokwadi anoda kuroora asiri tsotsi. Ndinoda anonamata ari HIV positive seni ane makore 44 kusvika 50 anoshanda. Anondida ngaandibate pa0776 009 617.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana 1, ndinodawo mudzimai anoda zvekuvaka imba tese ane mwana kana asina. Ane makore 25 zvichidzika akanaka pachiso ngaandibate pa0717 529 634.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri mukadzi ane makore 30 nemwana mumwe chete. Ndinotsvagawo murume anoda zvekuroora ane makore 32 kusvika 38 asina chirwere seni uye anoshanda . Masms kwete, ndoda anofona chero nguva pa0777 644 340.
Makadii veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 26 ndinotsvaga musikana wekuroora ane makore 18 kusvika 26. Ndinobatika pa0718 669 536.
Ndiri mukomana ane makore 19 ndinodawo musikana wekushamwaridzana naye ane makore 18 zvichidzika. Ndinobatika pa0783 750 782.
Ndiri kutsvaka musikana anoda zvemba ane makore 19 kusvika 22. Ini ndine makore 26, anoda ngaandibate pa0776 217 632.
Ndiri mukomana ane makore 20 ekuberekwa ndinotsvagawo musikana ane makore 18 kusvika 20 ari pachokwadi. Anoda ngaandibate pa0782 680 627.
Ndiri mudzimai ane makore 35, HIV positive asi handionekeri.
Ndotsvakawo murume ane makore 40-45 asingaratidzi kuti ane utachiona anoda zvemusha. Ndiri mupfupi uye ndakati simbei zvishoma. Akagezeka ngaandibate pa0718 312 649 nguva dzamanheru nekuti kubva mangwanani handibatiki ndinenge ndiri pabasa.
Makadii? Ndakambonyorera ndikasangana nevaida zvekutamba. Ndiri mukomana ane makore 27, ndiri mupfupi uye ndiri HIV positive. Ndinoda musikana kana mukadzi ane mwana mumwe chete anoshanda, kunyanya mucross-border ane makore 25 zvichikwira. Nhare yangu 0772 761 114.
Makadini veKwayedza? Ndiri mukomana ane makore 20 ndotsvagawo musikana anondida asina chirwere. Nhare yangu 0785 085 514.
Ini ndiri murume ane makore 41 ndinotsvagawo mukadzi anoda kuroorwa anoda zvemba. Andifarira ngaandibate pa0775 592 337.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 39 ndakambonyorera ndakawana matsotsi pamwe nevakadzi vevanhu matsotsi. Ndiri kutsvaga mukadzi ari pachokwadi ane mwana mumwe chete kana vaviri ane makore kubva 25 kusvika 35. Ndine vana vaviri, andifarira ngaandibate pa0777 655 703.
Makadii veKwayedza? Ndiri murume ane makore 40 ndinotsvakawo mukadzi asina chirwere akanaka. Ini handina chirwere, ndinoshanda. Anoda ngaandibate pa0773 516 862.
Ndiri mudzimai ane makore 36 nevana 2 ndinotsvagawo murume ari kuda zvekuroora. Kana paine anenge andirarira ndibate pa0778 215 286.
Ndiri murume ane makore 34 nemwana 1 ndinotsvagawo mudzimai ane makore 26 kusvika 30. Ndinoshanda kuBulawayo, andidawo nhamba yangu 0738 586 614.
Makadini veKwayedza? Ndiri mudzimai ane makore 32 nevana 3 ndinotsvagawo murume anoda zvemba ane makore 35 kusvika 40 anoshanda.
Ndinoda ane vana seni asina chirwere, ndinobatika pa0734 302 734.
Ndiri mukomana ane makore 24 ndinotsvaga musikana ane makore 18 kusvika 24 ari pachokwadi.
Anondibata pa0784 733 944.
Makadii veKwayedza? Ini ndiri musikana ane makore 20 ndinotsvagawo mukomana anoda zvekuroora anoshanda muHurumende.
Ngaave asina chirwere, ini ndiri HIV negative. Ane makore 23 – 26 anoda anondibata pa0716 341 570.
Ndinotsvaga musikana ane makore 26 zvichidzika. Ndiri murume ane makore 37. Fonai pa0784 324 579.